Yewu a, Ɛhe na Yɛkɔ? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bislama Bissau Guinean Creole Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French French Sign Language Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Maya Mongolian Moore Myanmar Ndau Nepali Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Russian Sign Language Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tokelauan Tongan Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Bible ka sɛ: “Ateasefo nim sɛ wobewuwu; awufo de, wonnim biribiara, na wonni akatua biara bio, efisɛ nnipa nkae wɔn bio.” (Ɔsɛnkafo 9:5; Dwom 146:4) Enti sɛ yɛwu a, yɛnni baabiara bio. Obi a wawu ntumi nnwen, ontumi nkeka ne ho, na onni atenka biara.
“Dɔte mu na wobɛsan akɔ”
Bere a Onyankopɔn ne Adam, onipa a odi kan, no rekasa no, ɔkyerɛɛ baabi a yewu a, yɛkɔ. Adam asoɔden nti, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ: “Woyɛ dɔte na dɔte mu na wobɛsan akɔ.” (Genesis 3:19) Onyankopɔn de “fam dɔte” na ɛbɔɔ Adam. Onyankopɔn nnya mmɔɔ Adam no, na Adam nni baabiara. (Genesis 2:7) Enti bere a Adam wui no, ɔsan kɔɔ dɔte mu, na na onni baabiara bio.
Ɛnnɛ nso sɛ obi wu a, ade koro no ara na ɛba no so. Bible kaa asɛm bi faa nnipa ne mmoa ho sɛ: “Wɔn nyinaa fi dɔte mu, na wɔn nyinaa san kɔ dɔte mu.”​—Ɔsɛnkafo 3:19, 20.
Sɛ yewu a, ɛnkyerɛ sɛ anidaso nyinaa asa
Bible ka owu ho asɛm a, ɛtaa de toto nna ho. (Dwom 13:3; Yohane 11:11-14; Asomafo Nnwuma 7:60) Sɛ biribi rekɔ so a, obi a wada hatee nte ho biribiara. Saa ara nso na obi a wawu te. Nanso Bible kyerɛ sɛ, sɛnea obi da a yetumi nyan no no, Onyankopɔn nso betumi anyan obi a wawu aba nkwa mu bio. (Hiob 14:13-15) Wɔn a Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ obenyan wɔn afi owu mu no, anidaso wɔ hɔ ma wɔn.
Share Share Yewu a, Ɛhe na Yɛkɔ?
ijwbq asɛm 53
Dɛn Ne Owusɔre?